Nouvelle Zélande: Jiro elektrika azo havaozina ny famoahana
Home » Travel Associations News » Nouvelle Zélande: Jiro elektrika azo havaozina ny famoahana
Nouvelle-Zélande dia mitarika an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny herinaratra azo havaozina aotra amin'ny zero ankehitriny amin'ny 85%. Miaraka amin'ny fifandanjana tsara eo anelanelan'ny geothermal, hydroelectric, herin'ny rivotra tsy tapaka mitohy sy ny masoandro sasany, ny firenena dia manana fifandimbiasan'ny herin'aratra maintso noho ny ankamaroany.
Manaraka izany dia ny fanafoanana ireo loharanom-baovao ireo amin'ny famatsiana ivelan'ny tambajotra amin'ny tranobe ary na dia amin'ny fiara an-tanety, rano sy fiaramanidina aza. Ohatra, nisy sambo mpamokatra herinaratra olona 20 vao natomboka niaraka tamin'ny hafainganam-pandeha enina "maharitra mandrakizay" enina izay mahazaka trano telo rehefa tonga. Ny teknolojia dia avy amin'ny Naval DC any Netherlands izay manolotra amin'ny fihaonambe voalohany manerantany momba io lohahevitra io, “Fiara elektrika mahaleo tena mandeha amin'ny angovo”Ao amin'ny University University of Delft Netherlands 27-28 septambra.
Ity fivoarana mahatalanjona ity dia mbola mamela ny fepetra takian'ny bateria hamela ny sambo handeha amin'ny hafainganam-pandeha mitovy amin'ny alina ary hamela ireo trano sy tambajotra hiatrika ny fangatahana tampony sy izay sisa tavela eo.
Ny fananganana rafi-pitehirizana angovo manerana an'i Nouvelle-Zélande dia hisolo tena «mpamadika lalao» ho an'ny firenena ao anatin'ny taona vitsivitsy, hoy ny fikarohana vaovao nataon'ny Transpower, tompona tambajotra nasionaly.
Nilaza ny orinasa fa ny valim-pikarohany dia mampiseho fa misy bateria mifandraika na mifampitohy amin'ny vondrom-piarahamonina dia antenaina ho toekarena ho an'ny trano sy orinasa manomboka amin'ny taona 2020- mampanantena “tena mety sy tombony azo avy amin'ny bateria ho an'ny mpanjifa any Nouvelle Zélande”.
Ankehitriny Transpower dia miomana hanao fitsapana ny rafitra fitehirizana bateria, raha miara-miasa amin'ireo mpitarika indostria mba hanosehana ny fanavaozana ny tsena sy ny vidiny dia nilaza ny orinasa fa ilaina ny "manokatra ny sandan'ny rafitra bateria mba hampitomboana ny sandany"
Ny tale jeneralin'ny Transpower momba ny fampandrosoana ny tambajotra Stephen Jay dia nilaza hoe: “Manombana am-pahavitrihana ireo fahafaha-mampiasa teknolojia vaovao manerana ny tambajotranay izahay. Eo am-piomanana ny hoavin'ny ho avy izahay ary ity fikarohana bateria ity no voalohany amin'ny tatitra maro izay havoakanay amin'ny fijerena ireo haitao izay mety hisy fiatraikany amin'ny orinasantsika. ”
"Tetikasa bateria amin'ny tsanganana fizarana herinaratra ambany sy amin'ny haavon'ny mpanjifa dia tombanana ho ara-toekarena ao anatin'ny taona vitsivitsy, noho ny fihenan'ny vidin'ny rafitra bateria," hoy i Jay. "Rehefa mandeha ny fotoana, mino izahay fa ho lasa ara-toekarena ihany koa izy ireo amin'ny fantsom-pandefasana herinaratra avo lenta ary izany dia hanome ny faharetan'ny bateria manerana ny rojom-panomezana rehetra."
Nilaza i Jay fa ny Transpower dia tsy mikasa ny hanao andrana amin'ny herinaratra avo lenta miaraka amin'ny bateria “ao anatin'ny fotoana fohy— fa hitady fotoana hiara-hiasa sy hianatra amin'ny hafa izahay amin'ny tetikasa iraisana raha ilaina izany.”
Araka ny fanadihadian'i Transpower, ny fiasan'ny bateria ho enta-mavesatra sy mpamokatra herinaratra amin'ny fotoana samihafa dia "mila dinihina, ary sakana amin'ny lalàna sy lalàna amin'ny fidirana."
Nandritra ny fotoana maharitra, nilaza ny fandinihana fa ny fitehirizana bateria amin'ny toerana rehetra ao amin'ny rojom-panolorana dia antenaina hanemotra na hanolo ny filana hananganana toha-peakira hafanana fanampiny ary tokony hampihena ny vidin'ny herinaratra ho an'ny mpanjifa.
Ny rafitra fitehirizana bateria mifototra amin'ny kaontenera ao amin'ny filaharan'ny 1-2MW "dia manana tombony fa azo ampiharina haingana dia haingana mba hikendrena ireo teritery manokana amin'ny fomba voafehy", hoy ny tatitra. Izy ireo dia mety ho "refy habe" amin'ny taona voalohany ilain'ny filàna, "miaraka amin'ny fahafaha-mampitombo ny fahafaha-mitahiry rehefa mandeha ny fotoana raha toa ka misy ny fitomboan'ny entana" Izany dia "hanatsara ny fandaniam-bola voalohany ary hampihena ny fihenan'ny vidin'ny fanitarana amin'ny ho avy", hoy ny tatitra.
Ho fanampin'izany, nilaza ny tatitra fa ny fanamafisana ireo tetikasa fitehirizana bateria dia hanohana ny drafitra nasionaly hanamafisana ny fandraisana ireo fiara elektrika. Raha ny filazan'ny Transpower dia manodidina ny 3,000 ny fiara mandeha amin'ny herinaratra ao amin'ny firenena ankehitriny, saingy fiara 64,000 no kendren'ny governemanta amin'ny 2021-22.
"Amin'ny ho avy, antenainay fa ny baterian'ny fiara mandeha amin'ny herinaratra dia mety hanana ny fahafaha-mitoetra ao anatin'ny tambajotranà batery, manome serivisy rehefa ampidirina hamily mandritra ny alina ny fiara," hoy i Transpower.